Mursal Oo Miiska Loo saaray Adduun Lacageed Hadii Hal Qodob Farmaajo uu ku taageero – KHAATUMO NEWS
Mursal Oo Miiska Loo saaray Adduun Lacageed Hadii Hal Qodob Farmaajo uu ku taageero
Xilliga kala guurka ayaa umuuqda in ay wejiyo badan isku arkaan cadow taas oo ka dhigeysa siyaasada oo lagu wada dig iyo dam leeyahay mid walbana uu dantiisa gaarka ah ka fiirsanayo.
Gudoomiyaha golaha Shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa la sheegay inuu hadda helayo dalab ah taageero umuujinta Madaxweyne Farmaajo.
Qorshahaan lacagta ah waxaa keenay Fahad Yaasiin oo ah Taliyaha Nabad Sugida oo si dhaw uraba soo laabashada Farmaajo ay saaxiib dhaw yihiin,isaguna Xilka uu sii heyn karo ama tubooyin kale oo dhaqaale ku heli uu iska dhuuqi karo.
Waxa la sheegay in Mursal dawlada Qatar ay Labo Milyan Dollar miiska usaartay si uu xildhibaanada ugu hogaamiyo meel marinta Sharciga Doorashooyinka Qaranka.
Tani waxay qeyb ka tahay dedaalada Xukuumada Doxa ay ugu jirto inaan booska laga badelin Maxamed C/llaahi Farmaajo oo danooyin badan iskaga xiran yihiin.
Waxay udedaaleyso Qatar waa inaan laga wareejin Dekada Hobyo oo mashruuca lagu dhisayo ay bilo ka hor saxiixday ayna Maal geshi ku sameyn doonto Dekadaas,balse soo laabashada Farmaajo ayey dan weyn u aragtaa.
Mucaaradka Xisbiyada waxay isha ku hayaan arimaha Sharciga doorashooyinka Qaranka Ee Golaha Shacabka hor yaalla,Ma cada go’aanka Mursal iyo Kuxigeenadiisa ay qaadan doonaan,xilli Adduun Lacageed hor yaallo,siday ku qaadan lahaayeena ay kaga xiran tahay damaca Farmaajo ay xildhibaanada San duleys kaga dhigaan in la meel mariyo
Previous Post: Deg Deg Daawo:Shirkii Golaha Wasiirada Puntland iyo Arrimaha Looga Hadlay,
Next Post: Daawo:Hees ila Meerayso Deeqo Afro Soo Saartay,